नेपालमै पहिलोपटक वन क्षेत्रमै पुगेर घाइते तथा बिरामी हुने वन्यजन्तुको उद्धारका लागि एम्बुलेन्स खरीद !::Nepal's Online News Portal
नेपालमै पहिलोपटक वन क्षेत्रमै पुगेर घाइते तथा बिरामी हुने वन्यजन्तुको उद्धारका लागि एम्बुलेन्स खरीद !
रत्ननगर – नेपालमै पहिलोपटक वन क्षेत्रमै पुगेर घाइते तथा बिरामी हुने वन्यजन्तुको उद्धारका लागि एम्बुलेन्स खरीद गरी ल्याइएको छ ।
‘वन्यजन्तु घाइते तथा बिरामी भए उद्धारका लागि पुग्छौं,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्समा अक्सिजन, जनावरको आकार अनुसारको वन्यजन्तु राख्ने भाँडो (केज) लिएर जान्छौं । वन्यजन्तुलाई अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्छाैं ।’
यसअघि नेपालमा वन्यजन्तुको एम्बुलेन्समा राखी उद्धार गरिने व्यवस्था थिएन । सदर चिडियाखानासँग एम्बुलेन्स भएपनि बाहिर प्रयोगमा आएको थिएन । अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि वन्यजन्तु संरक्षणमा थप टेवा पुग्ने संरक्षणकर्मीको भनाइ छ ।